Muuri News Network » SAWIRO: Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo si heer sare ah looga soo sagootiyay Uganda.
SAWIRO: Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo si heer sare ah looga soo sagootiyay Uganda.
Gudoomiyaha Jaalliyadda Soomaaliya ee Dalka Uganda Xuseen Garweyne iyo Jaaliyadda Beesha Biimaal ayaa kullan sagootin ah u sameeyay Suldaanka Beesha Biimaal Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo dib ugu noqonayay dalka.
Suldaanka ayaa booqasho howlo shaqa ah oo qaadatay 2 todobaad ku joogay Dalka Uganda asigoo haatan dib ugu laabtay dalka oo ay sugayaaan howlo badan. Suldaanka aya aad u bogaadiyay soo dhaweyntii wanaagsaneyd ay u sameeyeen Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Uganda iyo weliba Beesha uu u yahay Suldaanka waxaa uuna eebbe ugu barayay in uu kunabad yeelo halka ay joogaaan.
Sidoo kale Gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Xuseen Garweyne ayaa kullan la qaatay wasiir ku xigeenka gasshaandhigga kahor inta uusan dalka katagin waxa ayna kawadahadeen arimo badan oo kamid ah xiriirka wasaaradda gaashaandhiga iyo tawabarada loo fidiyo ciidama lakeeno Uganda si uu gudoomiyaha usoo dhaweeyo wada shaqeyn dhab ahna layeesho.
ISHA WARARKA –OO DHAN